लुकीछिपी बस्तीमा, कोरोनाको जोखिम
Home समाचार लुकीछिपी बस्तीमा, कोरोनाको जोखिम
२०७७ भाद्र ७ गते बागलुङ,
दुइ साता अघि भारतबाट आएका संक्रमितको साथमा लागेर हिड्दा बागलुङ आइपुगेका १४ जना मजदुरमा कोरोना संक्रमण देखियो ।
महोत्तरी घर भएका उनीहरु बागलुङ आइपुग्दा संक्रमणमा परेका थिए । सबैजना बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर डिस्चार्ज भए । समयमै रोक्न नसकेको भए उनीहरुबाट कोरोना संक्रमण समुदायमा पुग्थ्यो । भारतबाटै लुकिछिपी आएका केही युवाहरु समुदायमा पुगेर लुकेर बसेको भेटिएको छ । कतिपय मोटर ग्यारेजमा बसेको समेत भेटिएको हो ।
उनीहरु मध्ये अधिकांसले दोब्बर भाडा तिरेर निजी गाडि प्रयोग गरेका छन् । जिल्ला प्रवेशद्वारमा रातो नम्बर प्लेटको गाडिको चेकजाच नहुने भएपछि उनीहरुले छली काम गरेको पाइएको हो । मालढुंगा स्थित प्रवेशद्वारमा लुकिछिपी छिरेकाबाट संक्रमणको जोखिम बढीरहेको छ’ बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ का सदस्य सूर्य लामिछानेले भने, ‘कतिबेला को आएर बस्छ थाहै नपाइने भयो ।’ लुकिछिपी, रातो प्लेटका गाडि र मोटरसाइकल प्रयोग गरेर सदरमुकामका ग्यारेजमा ५० भन्दा बढी कामदार भित्रिसकेको उनले बताए । उनीहरुले कामकालागि वारीपारी गरेको निहु“ बनाउने गरेको भेटिएको हो ।
गोप्य रुपमा खोजी गर्दा उनीहरु भारतदेखि आएको थाहा पाएर नगरपालिकाले जवरजस्ती पिसिआर गराएको छ । अधिकांसलाई रामरेखा आधारभूत बिद्यालयको क्वारेन्टाइनमा लगिएको छ । दुइ साता अघि खाली भएका क्वारेन्टाइनमा बिहिवार सम्म ५० जना बसेका छन् । साता अघि शुन्य भएकोमा बिहिवार १ सय ६० जना जिल्लाका बिभिन्न क्वारेन्टाइनमा छन् । तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरुलाई होटलमा पठाइएको छ । होटलमा बस्नेले सरकारी रेटभन्दा बढीको खर्च आ“फै तिर्नुपर्छ । पैसा तिर्न नसक्ने मजदुरलाई भने बिद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखेर खुवाइएको छ ।
रातो नम्बर प्लेट हालेका जिप तथा कारले लकडाउनको फाइदा उठाएर तीन देखि चार गुणा बढी भाडा तिरेर यात्री ओसारेका छन् । उनीहरुले ती यात्रीलाई सिधै बस्तीमा पठाएकोले संक्रमणको जोखिम बढीरहेको गलकोट नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले बताए । ‘भारतको सिमाना देखि रातो प्लेटको कार चढेर आएकाले सदरमुकामबाट आएको पनि भन्न भ्याएका छन्’ उनले भने, ‘गाउ“टोलबासीको सहयोगमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ ।’ थाहै नपाएकाहरुले सिधै बस्तीमा पुग्दा संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए । कालो नम्बर प्लेटका बस र माइक्रो भने चैत ११ गतेदेखिनै चलेका छैनन् । छिटफुट चलेका जिपले पास बनाउने गर्थे । बिहिवारदेखि पास पनि रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बताए ।
बिहिवार भारतको मद्रासबाट आइपुगेका ५ जनालाई प्रहरीले रोकेर राखेपछि स्थानीय पालिकालाई खवर गरेको थियो । प्रति व्यक्ति ४ हजार रुपैया“ तिरेर उनीहरु भैरहवाबाट बागलुङ आइपुगेका थिए । ४ जना जैमिनी नगरपालिका र एकजना बागलुङ नगपालिका घर भएका उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर क्वारेन्टाइन पु¥याइएको प्रहरी निरिक्षक दिपक रिजालले बताए ।
मुगुका आगलागी पीडितलाई कर्णाली सरकारले राहत उपलब्ध गराउने
Rakshya Nayak - २०७७, ७ भाद्र आईतवार २०:३२ 0
सुर्खेत, ३० कात्तिक मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका-१ गमगढीका आगलागी पीडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी) को...
बाँदरले अन्नबाली सखाप पार्छ, तर राहत ?
Prakash Shrestha - २०७७, ७ भाद्र आईतवार २०:३२ 0
तनहुँ, २९ कात्तिक यसपाली कात्तिकको सुरुवातमा भएको बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्‍याएकाे छ । किसानलाई राहत दिनलाई तीनै तहका सरकारले क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन् । व्यास नगरपालिकाले गरेको...
मुगुकाे खाध्यन्न गाेदाम रित्तिनै लागे, १६८ क्विन्टल मात्रै मौज्दात
मुगु, २८ कात्तिक हिमाली जिल्ला मुगुका खाध्यन्न गाेदाम रित्तिनै लागेका छन् । गाेदाम रित्तिन लागेसँगै स्थानीयले जिल्लामा खाध्यन्न अभावकाे आशंका गर्न थालेका छन् । गमगढीमा रहेकाे खाद्य व्यवस्था...
राजनीति Rakshya Nayak - २०७७, ७ भाद्र आईतवार २०:३२ 0
अर्थ Rakshya Nayak - २०७७, ७ भाद्र आईतवार २०:३२ 0
समाज Rakshya Nayak - २०७७, ७ भाद्र आईतवार २०:३२ 0